Chọrọ akara batrị S10 na ekwentị gị? Anyị na-egosi gị otu | Gam akporosis
Otu n'ime ezigbo omume ọma nke Samsung Galaxy S10 na Samsung Galaxy S10 +, na mgbakwunye na ịnwe ngwaike nke na-eto ya n'elu mpaghara ahụ, bụ ohere ndị a na-enye site na usoro nke kamera ya n'ihu. Anyị egosiputala gị akwụkwọ ahụaja kachasị mma iji mee ka ọfụma Infinity-O gị ugbu a, anyị ga - agwa gị otu ị ga - esi nweta S10 na S10 + ihe ngosi batrị na ama ọ bụla nwere ihuenyo mkpuchi.
Na, otu n'ime nhọrọ ndị kachasị adọrọ mmasị iji nweta ọtụtụ ihe n'ihu igwefoto nke Samsung Galaxy S10 bụ iji ya dị ka ihe ngosi batrị. Na, anyị achọtala ngwa n'efu nke ga - enyere anyị aka itinye ọrụ a n'ime ekwentị ọ bụla nwere igwefoto n'ihu n'ihu na ihuenyo.
Batrị Mgbaaka, ngwa kachasị mma iji nwee ihe ngosi batrị S10
Anyị na-ekwu maka mgbanaka batrị, ngwa anyị nwere ike ibudata n'efu site na ngwa ngwa Google. N'ụzọ dị otú a, ọ bụghị naanị na anyị nwere ike iji ya na Samsung Galaxy s10 na Samsung Galaxy S10 +, mana ụdị ndị ọzọ dị ka Galaxy A8s, Huawei Nova 4 ma ọ bụ Nokia X71 nwere ike iji ngwa a wee nwee mgbanaka gburugburu ya egosiputa pasent Nke batrị.
N'okwu a, Batrị Ring emepụta ihe ngosi batrị n'akụkụ ọ bụla nke ihuenyo ahụ, yabụ anyị nwere ike iji ụdị ọ bụla nke smartphones maka ya, mana ọ dị mma maka ngwaọrụ nwere igwefoto mkpuchi na ihuenyo ahụ, iji nye onyogho zuru oke. Kwuo na ngwa a na-enye anyị ohere ịgbanwe akụkụ dị iche iche nke ihe ngosi batrị ya, yabụ anyị nwere ike ịgbanwe agba nke mgbanaka ahụ, ọkpụrụkpụ ya na nha ya.
Dị ka ọ dị na mbụ, enwere ụdị adịchaghị nke na-enye ụfọdụ ndozi, mana nsụgharị nke ngwa a nwere ihe ngosi batrị nke Samsung Galaxy S10 na ekwentị ọ bụla nwere oghere nwere ọ moreụ ezughị ezu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Yabụ ị nwere ike ịnwe ihe ngosi batrị Samsung Galaxy S10 na ekwentị ọ bụla nwere igwefoto nwere oghere